Wararka - Waa maxay unugga korontada ku shaqeeya
Qaybta tamarta korantada (HPU) waxaa loo isticmaalaa inay tahay aaladda saliidda keenta, taas oo ku xiran dhowr dhululubbooyin koronto-mareen ah iyada oo loo marayo nidaamka dhuumaha dibedda si loo xakameeyo falalka noocyo badan oo filtarka ah.
Taangiga shidaalka, mashiinka shidaalka iyo aaladda tamarta mashiinka ayaa sameeya nidaam il madaxbanaan oo laga helo saliida. Saldhigga saliida waxaa lagu qalabeyn karaa nidaamka xakamaynta PLC, kaas oo xakameynaya dhammaan howlaha haydarooliga gudaha wuxuuna abuuraa calaamado wuxuuna xakameynayaa haanta saliidda, bamka saliidda iyo aaladda tamarta taageere si loo sameeyo nidaam madax bannaan oo laga helo saliidda tamarta. Saldhigga saliida waxaa lagu qalabeyn karaa nidaamka xakamaynta PLC, kaas oo xakameynaya dhammaan howlaha hawo-mareenka gudaha wuxuuna abuuraa calaamado iyo kontaroolo.
Xaaladaha caadiga ah, bamka saliida ayaa saliida siiya nidaamka, wuxuu si otomaatig ah u hayaa cadaadiska la qiimeeyay ee nidaamka, wuxuuna ogaadaa shaqada haynta waalka meel kasta oo loo maro xayiraadda waalka koontaroolka: gobolka shaqeynaya, dhaqaaqa hidda oo ay maamusho qalabka 'solenoid valve' iyo nidaamka amarka nidaamka Ku dhaq sool soodhaweynta si loo xakameeyo cadaadiska saliidda iyo sii deynta tamarta ee isku-duwaha, ka dibna la xakameeyo qalabka saliidda ee saliidda, kaxeeya mashiinka iyada oo loo marayo habka gudbinta farsamada, iyo hirgelinta xiritaanka degdegga ah, furitaanka iyo xidhitaanka caadiga ah iyo xakamaynta tijaabada.
Mashiinka cadaadiska sare leh ayaa lagu hagaajin karaa wiishka waalka ama si toos ah loogu isticmaali karaa inuu yahay jiheeye. Saliida hareeraha ee dheeraadka ah waxaa dib loogu soo celiyey saldhigga saliida ee Haydarooliga, sidaa darteed nidaamka dhuumaha ayaa adeegsanaya hal saliid oo laga soo galo-hal dhuumaha soo celinta saliida si loo xakameeyo dhowr walxaha isku xira. Saldhiggan Haydarooliga oo wata tiknoolajiyad wadis gaar ah ayaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo ficilka falka weyn ee uumiga iyo dhaq dhaqaaqayaasha nidaamka wareegga marawaxadaha uumiga.
Qeybta korantada waxaa loo habeeyay xaalado kala duwan oo codsi ah, tusaale ahaan, waxaa loo isticmaali karaa gawaarida xamuulka ee ku socda deegaanno qalafsan, ama waxaa loogu adeegsan karaa xaaladaha maaraynta culus ee muddada-dheer, iyo munaasabadaha kale ee u baahan wax-qabad iyo tayo sare leh.
Natiijadu waa barxad aad u kala duwan, iyadoo la adeegsanayo qaybaha caadiga ah, ee la qabsan kara inta badan xaaladaha dalabka ee suuqa looga baahan yahay. Tirakoobka macmiilka ee qaybaha Haydarooliga ayaa hoos loo dhigay illaa xad, iyo culeyska shaqada ee naqshadaha aan caadiga ahayn ayaa si weyn loo dhimay. .
Waxay sidoo kale si weyn u yareyneysaa culeyska shaqada ee naqshadeynta aan caadiga ahayn. Tusaale ahaan, unugga korontada ee loo yaqaan 'HE power unit' wuxuu ku dhisan yahay barxad kala duwan. Cabirka matoorka la oggol yahay wuxuu u dhexeeyaa 80 illaa 132mm (0.3 ~ 4.5kw), barokaca mashiinka wuxuu u dhexeeyaa 0.24 ilaa 5.7cc. -Qeybta korontada ayaa maamuli karta 4 dhululubbooyin koronto ah. Qaybta ugu muhiimsan ee nidaamku waa adabtarada. Waxaa jira laba qeexitaan oo kala duwan. Waxay leedahay qaabab kala duwan iyo habab rakibo.